မိဘတှေ ပေးစားလို့ ယောကျြားယူခဲ့ ရ တဲ့ အမြိုးသမီး ရဲ့ မင်ျဂလာဦးည အတှကွေုံ့ – Let Pan Daily
မိဘတှေ ပေးစားလို့ ယောကျြားယူခဲ့ ရ တဲ့ အမြိုးသမီး ရဲ့ မင်ျဂလာဦးည အတှကွေုံ့
ကြှနျမရဲ့ မင်ျဂလာဦးည ဆိုပမေယျ့လညျး ကြှနျမ မပြျောနိုငျပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့…ကြှနျမ ရဲ့ မင်ျဂလာဦးညဆိုပမေယျ့လညျး ကြှနျမ မပြျောပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့က မိဘတှကေ အတငျးပေးစားလို့ ယူခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။သူနဲ့ကိုယျကလညျးအခုမှ မွငျဘူး၊ တှဘေူ့းတာဘဲ ဖွဈပါတယျ။
ကြှနျမ ကွောကျပွီးတော့ တုနျနတေယျ။ သူက ကုတငျပျေါ တကျလာတယျပွီးတော့ သူ့ကိုယျပျေါ ဝတျထားတယျ့အဝတျအစားတှခြှေတျလိုကျပါတယျ။
သူက ကြှနျမရဲ့ ပုခုံးလေးကို အသာလာ ကိုငျတာ ကွောငျ့ဘဲ ကြှနျမရငျထဲ ကိုရှိနျးဖိနျးပွီး တုနျသှား တာပဲရှငျ။ ပွီးတော့ သူက ကြှနျမအနားကိုထပျကပျလာပွီးတော့ကြှနျမကို တိုးတိုးလေးကပျပွီး ပွောခဲ့ပါတယျ။ ငါတို့တတှေ.. ညီအဈမတှလေိုပဲ နသှေားရအောငျဟယျ တဲ့။တိနျ……ဘဝအမောတှေ ပွပြေောကျနိုငျကွပါစနေျော။
ကျွန်မရဲ့ မင်္ဂလာဦးည ဆိုပေမယ့်လည်း ကျွန်မ မပျော်နိုင်ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့…ကျွန်မ ရဲ့ မင်္ဂလာဦးညဆိုပေမယ့်လည်း ကျွန်မ မပျော်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့က မိဘတွေက အတင်းပေးစားလို့ ယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့ကိုယ်ကလည်းအခုမှ မြင်ဘူး၊ တွေ့ဘူးတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မ ကြောက်ပြီးတော့ တုန်နေတယ်။ သူက ကုတင်ပေါ် တက်လာတယ်ပြီးတော့ သူ့ကိုယ်ပေါ် ဝတ်ထားတယ့်အဝတ်အစားတွေချွတ်လိုက်ပါတယ်။
သူက ကျွန်မရဲ့ ပုခုံးလေးကို အသာလာ ကိုင်တာ ကြောင့်ဘဲ ကျွန်မရင်ထဲ ကိုရှိန်းဖိန်းပြီး တုန်သွား တာပဲရှင်။ ပြီးတော့ သူက ကျွန်မအနားကိုထပ်ကပ်လာပြီးတော့ကျွန်မကို တိုးတိုးလေးကပ်ပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့တတွေ.. ညီအစ်မတွေလိုပဲ နေသွားရအောင်ဟယ် တဲ့။တိန်……ဘဝအမောတွေ ပြေပျောက်နိုင်ကြပါစေနော်။credit
အိန္ဒိယက ကျိုင်းကောင် အုပ်ကြီးလာရင် ကြော်စားမယ် ဆိုသူတွေ အတွက် ကျိုင်းကောင်ကြော်နည်း
အရမျး အသုံးဝငျသော မွနျမာဆေးမွီးတို ပေါငျးခြူပျ (အမြား သိအောငျ မြှဝပေေးပါ)
ခိုးစားနေ တဲ့သူတှေ ကို ဘယျ လို ဆကျဆံ သငျ့သလဲ?
မုန်းနေသူ ကို ချစ်စေ လိုလျှင်…. ဒီနည်းလေး လုပ်ကြည့်ပါ…